Or2 Ọdịdị Fotochromic Kanopi - Imewe Mmewe
Ọdịdị Fotochromic Kanopi
Ọdịdị Fotochromic Kanopi Or2 bụ otu ihe eji arụ ụlọ n’elu ụlọ nke na-anabataghachi ìhè anyanwụ. Akụkụ polygonal nke elu ahụ na-eme ka ọkụ na-enye ihe na-acha uhie uhie, na-ese ihe na ike nke ụzarị anyanwụ. Mgbe ọ dị na ndò, akụkụ nke Or2 na-acha ọcha. Agbanyeghị na mgbe anwụ chapụrụ achapụ ha acha, na-emebisị oghere dị n'okpuru ebe a. N'ehihie, Or2 aburula igwe ihe, ma, ya na oghapu ohere di n'okpuru ya. N'abali Or2 na - agbanwe rue chandelier buru ibu, na - ekpughere ihie nke a na - anakọta site na mkpụrụ ndụ fotovoltaic ejikọtara n'ehihie.
Aha oru ngo : Or2, Aha ndị na-emepụta ya : Christoph Klemmt & Rajat Sodhi, Aha onye ahịa : Orproject.
Ọdịdị Fotochromic Kanopi Christoph Klemmt & Rajat Sodhi Or2